ပျော်စရာ Gazette ရွာမှာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ပျော်စရာ Gazette ရွာမှာ
ပျော်စရာ Gazette ရွာမှာ
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Jun 22, 2017 in Creative Writing, My Dear Diary, Poetry | 27 comments
Kyeemite is happy
ယနေ့သည်ကား မန္တလေးဂေဇက်ဝက်ဆိုက် ကြီးအတွက်
အင်မတန်မှ မင်္ဂလာရှိလှသောနေ့ ကြီးတစ်နေ့ ဖြစ်ပေတော့သည်
မေ့ ခဲ့ ပျောက်ခဲ့
မန်းဂဇက်ရဲ့ ရွာသူ ရွာသားတွေကို
ဦးကြီး တင်ထားတဲ့ပုံကို ကြည့်မိတော့မှ အရင်က ရွာကို ပိုလွမ်းမိသွားတယ်ဗျို့။
အဲ့နေ့က ဆုံကြရာမှာ ထူးထူးခြားခြား မမဂျီးခင်ဇော်ပါ ရောက်လာတဲ့နှစ်။
ကိုအမတ်ကြီး မှန်အကြည်ကို ဝင်တိုက်မိတဲ့နှစ်။
ဂဇက် တံဆိပ်ရိုက် အမှတ်တရ အကျီ င်္တွေ စဝတ်တဲ့နှစ်။
အခုနေများ အဲ့လို ဆုံစည်းကြမယ် ဆိုရင်တောင်
အဲ့တုန်းကလောက် ကြည်နူးရပါ့တော့မလား မသိ။
မီးလိုပဲ တဟုန်းဟုန်း တောက်ခဲ့မိကြသေးတာကိုးးး
ဟိုတစ်လောက ရွာသားတစ်ယောက်နဲ့ (ဘယ်သူလဲမမေးရ ) စိမ်းလန်းစိုပြည်ထဲသွားတော့တောင် အဲဒီနေရာလေးကို မြင်ပြီး လွမ်းနေကြသေးတယ်.. ရွာသူားတွေနဲ့ မဆုံဖြစ်တာ အတော်ကြာနေပြီ..ပြန်ဆုံရင် ကောင်းမှာပဲလို့ ပြောနေကြတာ..
အမှတ်တရတွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ် .. ရွာသူဖြစ်ခဲ့တာ ၇ နှစ်ရှိခဲ့ပြီ .. အစပိုင်းမှာ ငြင်းခုန်ရင်း ဗဟုသုတတော်တော်ရခဲ့ဖူးတယ် .. ကိုယ်ထင်မြင်တာတွေ မှားခဲ့တာတွေနဲ့ အမြင်မတူတာတွေကို လက်ခံတတ်တဲ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုရခဲ့တယ် ..
မိတ်ဆွေတွေ တိုးခဲ့တယ် .. လူတိုင်းနဲ့ မိတ်ဆွေမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီးတဲ့သူကတော့ ထာဝရမိတ်ဆွေဖြစ်သွားတဲ့အထိ ရင်းနှီးသွားခဲ့ကြတယ် .. ဒီရွာထဲ မ၀င်ကြ မစည်ကားကြပေမယ့် ရင်ထဲက စိတ်တွေကတော့ မပြောင်းလဲကြပဲနဲ့ ရွာသူားစိတ်အပြည့်ရှိကြတယ်ဆိုတာတော့ သေချာပါတယ် .. အလွမ်းပြေ လာစရာနေရာတစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက် သူကြီးကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..
“ကိုယ်ထင်မြင်တာတွေ မှားခဲ့တာတွေနဲ့ အမြင်မတူတာတွေကို လက်ခံတတ်တဲ့အကျင့်ကောင်းတစ်ခုရခဲ့တယ် ..”
ဒီမှာက ” ရိ ထေ့ ငေါ့ စွာ ဆဲ စောင်း ရန် လှောင် ” သ်ိပ်မရှိဘူး ။
ရှိတော့ ရှိတယ် နဲတယ် ။
နေတတ်ရင် ကျေနပ်စရာပါ ဆြာမိုက်ရယ် …
အရင်လို ပျော်ပျော်ပါးပါး ရေးကြမန့်ကြမယ်ဆို ရွာစည်တာပေါ့…
ရွာသူရွာသား အသစ်အဟောင်းများအားလုံးကို “ကြိုဆိုပါတယ်” လို့…
ကိုရင်ကျောက်သားရတနာလေးကို မနှင်းက ရတနာရွှေကြုပ်နှုပ်ငုံနေတုန်း အမှတ်တရပေါ့ဗျား
David Thar Geet
ရွာမှာတွေ့ ဆုံပွဲတွေ လုပ်တယ်ဗျ။
အဲ့ဒီ တွေ့ ဆုံပွဲတစ်ခုကို
ကျနော်တက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး ပြောမိလို့ 
ကျနော် ဘာမှ ပြန်မပြောခဲ့ပါဘူး။
အဲ့ဒီ ညီငယ်နဲ့ ကျနော် အခင်အမင်မပျက်
ဒီနေ့ အထိ ပေါင်းသင်းနေဆဲပါ။
ကျနော် တွေ့ ဆုံပွဲတစ်ခုကို တက်မိလို့ တဲ့
စိတ်ဆိုးပြီး ၆ လလောက် စကားမပြောပါဘူး။
နောက်မှ သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောပြလို့ သိရတာပါ။
လူ့ အလို နတ်မလိုက်နိုင်ပါလား။
ကိုရင်စိန်ဗိုက်တို့လို ရွာသားဟောင်းတွေ ပြန်ဝင်လာတာ အားရတယ်ဗျို့…
ရွာကတော့.. “ဒီအတိုင်းဆက်၍ ရှိနေဦးမည်.. ခိုင်” ဖြစ်ပါကြောင်း..။
သဘာဝရိပ်သာ အလှူက နောက်ဆုံးအလှူပဲနော်။
စာရေးပြီးရင်လည်း ပြန်မန့်တဲ့ ကွန်မန့်တွေက ရွာထဲ တင်ရတာနဲ့ ဖွဘုတ်နဲ့ မတူဘူးရယ်။
ခင်ဇော်ပြောသလို ရန်ဖြစ်ရင်တောင် ရွာထဲကမှ လက်ရည်တူတယ် ထင်မိ။
(စကားအတင်းစပ်- ဝေေ၀့နောက်က ရပ်နေတာ ဘယ်သူလဲ၊မမှတ်မိလို့)
မဝေနောက်က ကချင်နုထွားဂျီးလေ… Woody Woodpecker ကေနဲ့
ဆောရိုးကို ဖြူဖွေးနဲ့ ကန်တော်ကြီးပွဲမှာ လာတာပဲ မှတ်မိလိုက်တာ။
အန်တီမှီရဲ့ဘေးက ဘယ်သူပါလိမ့် !
ကိုမိုက်​​ရေ ဓာတ်​ပုံ​လေးအမှတ်​တရ သိမ်းထားလိုက်​အုံးမယ်​ဗျာ ကိုယ်​တခါမှမပါဖြစ်​​ပေမဲ့လဲ အဲလိုဘဲ Group ပုံ​လေး​တွေ​တွေ့ရင်​ လာချင်​မိသား။ အင်​တာနက်​က​တော့သိတဲ့ အတိုင်းပါဘဲ စိတ်​ရှည်​သီးခံ လိုင်း​ကောင်းရန်​​ပေါ့။ Mrဆို​တော့ လဲလုပ်​​နေဟန်​တူရဲ့ ဖွဘုတ်​​လောက်​​တော့ မ​ကောင်းနိုင်​ဘူး​ပေါ့ဗျာ။
ဦးလေးမန်း လာချင်တယ်ဆိုလို့ဝမ်းသာတယ်ဗျာ..ဒီတစ်ခါဆုံဖြစ်ကြရင် ဖိတ်ပါမယ်
ဓါတ်ပုံမြင်လိုက်မိတော့ မှ အားလုံးကို သတိရလွမ်းဆွတ်လာတယ်။
ကြည့် ဇမ်း … အပြင်မှာမြင်ဖူးတာကျနေတာပဲ ???
Shar Thet Man says: (Edit)
နောက်တစ်ခါတွေ့ကြရင် စမီးကိုခေါ်ပါ့မယ် ???